Iindaba - I-YALIS Uyilo lokuPhatha umnyango ngo-2021
Isiphithiphithi esidalwe yi-COVID-19 senze ukuba iinkampani zingabe zisasondela ekukhanyeni ekupheleni kwetonela, kodwa zibambeke kwinkungu ukufumana indlela yokuphuma. —— yi-European Union Chamber of Commerce e-China
Ekuqaleni kuka-2020, i-COVID-19 yaqhambuka. Okwangoku, ubhubhane wehlabathi lonke ungenise kwintsholongwane yesine yokuqhambuka. Ukuqaliswa kwamachiza ziindaba ezimnandi zokulwa ubhubhane, kwaye umjelo wesine inokuba lidabi lokugqibela. Nangona kunjalo, ifuthe ngokuqinisekileyo liya kufikelela kude. Ngesi sizathu, i-China iseke ipateni entsha yokujikeleza okujikelezayo. Oku kuyakunceda i-China kunye noqoqosho lwehlabathi ukwakha ngokutsha.
Kunokuthiwa ukusuka ngo-2020 ukuza kuthi ga ngoku, sihlala sikwisiphithiphithi esimiselweyo, umntu abone isigqibo kwaye umntu abone isiphithiphithi. Oku kudale imeko eyaphula umhlaba kumashishini ahlukeneyo kwihlabathi liphela ngo-2020 nango-2021. Kwiinkampani, ikamva liza kujongeka njengomgca othe ngqo kuphela xa bejonga kude nangokuchanekileyo.
Ngaphantsi kwesi siqalo, amandla emveliso yeYALIS ngo-2020 afezekise ukonyuka komkhwa.
Ngo-2020, i-YALIS emnyango yentsimbi yenze impumelelo kwimveliso iyonke kunye nentengiso eyongezelekileyo, ethe yanda nge-108% kunye ne-107% xa kuthelekiswa no-2019. isiphatho seminyango yesikhumba esenziwe ngokuzimeleyo nguYALIS bonke bayathandwa ngabathengi kwaye babalasele kumzi mveliso wehardware.
Kwixesha elidlulileyo, imakethi yekhaya yezixhobo zentengiso ibisoloko isenza isicwangciso esifana nokwazisa, ukwetyisa, ukufunxa kunye nokwenza ngokutsha. Esi sicwangciso siluncedo ngokwenene ekudlaleni ithuba lokuhambisa emva kwexesha ngendlela ethile. Nangona kunjalo, njengoko indawo yokubambisa iqhubeka nokuncipha, isengahambelani.
Ngo-2021, umzi mveliso wehardware weentsimbi kufuneka wophule ukuxhomekeka, wenze iziphene kwinto entsha, ujonge utata, ukhawuleze kuneemakethi, ukuze ukwazi ukuqonda isingqisho sentengiso.
Kwiimarike ezingalindelekanga zasekhaya nezamazwe aphesheya, iimfuno zabasebenzisi zihlala zingabokuqala. Ke ngoko, ejongene nenqanaba elitsha, ipateni entsha, umngeni omtsha kunye nethuba elitsha, i-YALIS iqulunqe isicwangciso esikhulu kunye nombono wexesha elizayo.
Kwisiqingatha sesibini sonyaka ka-2021, siza kuyomeleza iinzame zethu zokujonga iimfuno zabasebenzisi abaninzi kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi nakwizixhobo zomnyango, ukuhlala kwindawo ephambili yentengiso, kwaye someleze ngakumbi amava omsebenzisi kwizixhobo emnyango.
Qhubeka uthabathe izicwangciso ezibini eziphambili zorhwebo lwamanye amazwe kunye nemveliso esizisebenzelayo njengomgca ophambili wophuhliso. Kwelinye icala, ibizibeke ngokuqinileyo njengomthengisi wobuchule besisombululo somnyango; Kwelinye icala, u-YALIS uqhubeke nokwandisa isikali sokuziphatha komzi mveliso kulawulo olungqongqo ngakumbi kwimveliso. Kwi-2021, amandla emveliso aya kuqhubeka nokukhula, ukuthunyelwa kuya kukhawuleza, kunye nenkonzo engcono kubathengi abaphezulu.
Endleleni eya ekwenziweni komgangatho wekhompyuter wehardware, i-YALIS ibisenza phambili. Ngokhuphiswano olukhulayo lomakethi kunye notshintsho olukhawulezileyo, u-YALIS wenze impendulo ekhawulezileyo. Ngelixa i-YALIS iqhelana notshintsho, ikomeleza ukomelela kwayo. Kwixesha elizayo, yintoni eza kuziswa nguYALIS kuthi? Ummangaliso kufanelekile ukujonga phambili.